MAXAA KEENAY IN RAGGA DABADA UGU GALMOODAAN DUMARKA? - Hablaha Media Network
MAXAA KEENAY IN RAGGA DABADA UGU GALMOODAAN DUMARKA?
HMN:- Maalmahaan waxaa la sheegaa naago xaasas ah oo ka dalbaya nimankooda in ka isticmaalaan gadaal (dabada) taas maxaa keeni kara, inta badan nimanka ayaa dalbada gadaal waxayna u dalbadaan meesha oo ciriiri ah oo aadna u kulul iyo sababo kaleba.
tolow naagaha qaarkooda maxaa ku kallifa inay galmada dabada dalbadaan.
3- inay gabar yartahay oo ay been u sheegayaan habraha waaweyn oo xunxun oo ay u amaanayaan galmada gadaal.
4- inay tahay naag kacsi badan, maxaayeelay naagaha kacsiga badan wax kasta waa ka suuroobayaa.
5- inay nafsi ahaan u jirran tahay oo ay u baahanyahay daawo nafsiyeed.
6- inay jaahil tahay oo aysan ogeyn xumaanta uu leeyahay falkan.
marka maxaa laga rabaa ruuxa xaaladan oo kale la soo gudboonaato, waxaa laga rabaa inuu si fiican ula hadlo oo ka dhaadhiciyo falkan inuusan bannaanayn oo uu yahay fal Xaaran ah oo AY Naagtu kaaga Furmeeydo oo Diiniyan ay tahay mid aan kuu Banaa neen, haddii ay tahayna mid kacsi badanna inuu si fiican u qanciyo ilaa ay ka dheregto, kana isticmaalo meedha loogu talagalay Dii niyan.